अभिनेता Andrei Sokolov: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन
अभिनेता Andrei Sokolov सजिलै अवस्थित गर्न सक्छन्, र त्यहाँ रोक्न मान्छे को प्रकार छ। यो छ, जस्तै सबै समय निरन्तर आत्म-सुधार को लागि प्रयास, नयाँ sensations लागि देख। जीवनी Andrei Sokolov यसलाई स्पष्ट उहाँले छ भनेर बनाउँछ बलियो व्यक्तित्व अत्यन्तै ऊर्जा संग। यो व्यक्ति कमजोर र कमजोर-इरादों समर्थन गर्न अन्य नेतृत्व गर्न सक्षम छ। माथिको सबै बाहेक, Sokolov महिलाहरु को मूर्ति छ, उहाँले सबै उमेरका प्रशंसक धेरै छ।
एक रोचक जीवनी Andreya Sokolova। उहाँले - एक मूल Muscovite जन्म अगस्ट 13, 1962। मास्को, यो एउटा सानो काठको घर मा आफ्नो सबै बाल्यकाल बित्यो। एक प्रारम्भिक उमेर देखि केटा ठूलो उपलब्धि गर्न सबै प्रयास, पूर्ण विकास गर्न थाले।
एन्ड्रयू लागि खेल क्लब एक घर जस्तै थियो, त्यो प्रतियोगिताको "स्वर्ण Puck" मा शीर्षक "सर्वश्रेष्ठ गोल रक्षक" सम्मानित गरिएको थियो। पछि, पनि एक पेशेवर टीम मा प्ले मान्छे थियो खेल को मास्टर को लागि एक उम्मेदवार। सबैलाई एक कायता यो कायर Sokolova छलफल गर्न सक्दैन त हुन, हकी खेल्न छैन थाह छ। साहसी र बलियो - यी गुणहरू यो चिनारी। तर उहाँले अझै पनि पाठ धेरै थियो कि बाहेक नै सीमित छैन खेल।
एन्ड्रयू आठौं ग्रेड गर्न चौथो देखि, त्यो नृत्य हल नृत्य अध्ययन, चार वर्षसम्म संगीत स्कूल जान्थ्यौं। आफ्नो पार्टनर तिनीहरूले मास्को को विजेता बन्यो यो संग Svetlana Pakhomova थियो। तर केटाहरू बस एक वर्ष कडा एन्ड्रयू संग भयो रूपमा, वृद्धि मा लम्बी हो, उहाँले एकाएक परिपक्व र धेरै 15 को रूपमा सेन्टिमिटर भयो। यस ब्यालेट अब उहाँलाई लागि, उहाँले नृत्य देखि सेवानिवृत्त थियो।
बाल्यकाल देखि व्यापक चासो र व्यवसायहरुको बावजुद Sokolov थिएटर, एक अभिनेता उहाँलाई छोड्न गर्नुभयो बन्ने सपना raved। थिएटर र सिनेमा मान्छे को दुनिया उहाँले एक कलाकार बन्न सक्छ भन्ने निश्चित थियो, त्यसैले टाढा र काल्पनिक देखिन्थ्यो।
जीवनी Andrei Sokolov विद्यार्थीलाई शरीर जारी, तर इच्छा र त्यो थिएटर मा थिएन अध्ययन को सपना विपरीत। वा किनभने अनिश्चितता को, हुनत यो शायद, वा किनभने सशक्त कारण आमाबाबुको भयो एन्ड्रयू को मास्को उड्डयन संस्थान प्रविष्ट गर्नुभयो। unloved शिल्प अध्ययन गर्दा धेरै पटक कलेज अन्त्य गर्न तयार भएको थियो।
1986 मा, एक स्नातक एक उपाधि पकड, आफ्नो विशेषता भनिन्थ्यो aviainstituta "उत्पादन को लागि एक यांत्रिक ईन्जिनियर विमान को।" यो मिलाप र वितरण कार्य सुरु गर्न समय छ, तर एक अभिनेता बन्ने सपना तर्साउने। अन्तमा एन्ड्रयू तुरुन्तै स्नातक पछि, त्यो Shchukin स्कूल मा एक चयन समिति खडा गरियो, निर्णय गरे। एक सीट 286 मान्छे, तर Sokolov पागल ऊर्जा थियो, र उहाँले पहिलो प्रयास मा स्वीकार गरिएको थियो - उहाँको संभावना त्यहाँ वस्तुतः कुनै थियो।
अभिनेता Andrei Sokolov: को सिनेमा मा पहिलो कदम
आफ्नो debut भूमिका 1987 मा एक इच्छुक अभिनेता थियो: सफलतापूर्वक पार परीक्षण, एन्ड्रयू फिल्म को चालक दल गर्न दाखिल भएको थियो "यो कालो टोपी मा उहाँले एक कुचो छ।" तर वास्तविक प्रसिद्धि को विवादास्पद फिल्म perestroika युग "साना वेरा" मा सर्गेई भूमिका संग, अभिनेता आए। स्क्रिन अभिनेता मा तस्वीर को रिलीज पछि Andrey Sokolov प्रसिद्ध भए। यसबाहेक, यस फिलिम पछि उहाँले त्यतिन्जेल, तिनीहरूले विचार थिए, त्यहाँ कुनै लिंग सबै थियो जो विशाल देश, एक सेक्स प्रतीक भयो। यो भूमिका एन्ड्रयू, फिलिम मा एक महान सुरु दिनुभयो उहाँले याद थियो र शूटिंग निमन्त्रणा गरिएको थियो।
आज अभिनेता को Filmography सुन्दर चित्रहरू एक विशाल संख्या छ। हालैका वर्षहरूमा लगभग Sokolov Andrey को स्क्रीन देखि धमकना छैन, आफ्नो फिलिमहरु धेरै लोकप्रिय छन्। ट्रयाकको सूचीमा केवल एक श्रृंखला, कलाकार एक दर्जन भन्दा बढी। तिनीहरूलाई बीच "लाल वर्ग", "रक्षा को लाइन", "वकील" र धेरै अन्य। एक धेरै प्रतिभाशाली अभिनेता - Andrei Sokolov, त्यो पृष्ठभूमिमा मुख्य रूप प्रस्ताव छ कि भूमिका।
Shchukin थियेटर स्कूल Falcons संग 1990 मा स्नातक सम्मान, र त्यसपछि सफलतापूर्वक थियेटर प्ले। मास्को शहर परिषद, थिएटर मा। "Luna" Leninsky Komsomol र थिएटर मा। को अभिनय पेशा साथै Andrei निर्देशक गरेको पेशामा महारत र उहाँले प्ले को उत्पादन उठाए। एक निर्देशक रूपमा आफ्नो कल कार्ड प्ले "बंक।" थियो 1999 देखि एक प्रतिभाशाली अभिनेता र निर्देशक, को थिएटर "XXI सताब्दी को स्वगत" को कलात्मक निर्देशक छ।
पुरस्कार र पुरस्कार
अभिनेता Andrei Sokolov धेरै पुरस्कार र पुरस्कार को आफ्नो रचनात्मक गतिविधिहरू लागि प्रदान गरियो:
1 पर्व "नयाँ रूसी सिनेमा" ( "भूत जीवनको पत्र") मा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता लागि पुरस्कार - 1994;
2. क्रम सेन्ट एनी तेस्रो डिग्री को - 2000;
पर्व "बाल्टिक पर्ल" ( "पातालमा, सातौं सर्कल") मा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को लागि3पुरस्कार - 1994;
4 स्वर्ण आदेश "कला गर्न सेवा" - 2007;
5 मूर्ति "राम्रो स्वर्गदूत" - 2007;
6 स्वर्ण पदक एफ Plevako पछि नाम - 2002।
Andrei Sokolov: प्रेम जीवन
सबै प्रेम को लागि, Andrei Sokolov ताला र चाबी अन्तर्गत राख्न खोज्छ, तर यो प्रसिद्ध अभिनेता राख्न गोप्य परिवार आनन्द लगभग असम्भव छ। महिला हृदय चोरेछ र पुष्टि स्नातक - यो लामो Sokolov कि साधारण ज्ञान छ। तर उहाँले एक जवान मोडेल ओल्गा, आफ्नो पत्नी भइन् र एउटा अचम्मको छोरी सोफिया जन्म दिए जो को आकर्षण प्रतिरोध गर्न सकेन।
अभिनेता पहिले नै पटक एक युवा उमेर मा विवाह भएको छ, तर पति को भूमिका मा एन्ड्रयू केवल एक वर्ष, वैवाहिक अप भङ्ग जो पछि, बच्चा संघ मा थिएन बिताए। पहिलो असफलता पछि Sokolov पारिवारिक जीवन उहाँलाई लागि छैन भनेर निर्णय, तर स्नातक विश्वास लजालु सौन्दर्य अगाडि संकुचन।
सुरुमा, एन्ड्रयू बस कहिलेकाहीं ओल्गा संग, त्यसपछि चुपचाप गहिरो भावना मा गरिएका Flirtation भेटे। सबै सँगै थप समय खर्च प्रेमीहरूको, यो बारेमा डेढ वर्ष लामो थियो। तर बित्तिकै त्यो उनको गर्भावस्था Sokolov घोषणा रूपमा, एक inveterate स्नातक लडाइँ बिना surrendered र वेदी एउटा सौन्दर्य लिए। अभिनेता आफ्नो सानो सोफिया मा doted। यो कहिलेकाहीं सरल मानव आनन्द एकदम बिट आवश्यक छ कि बाहिर जान्छ!
अपराध रोमाञ्चक "भाग्यशाली नम्बर Slevin": अभिनेता र भूमिकाको
Calista Flockhart र उनको पछि आनन्द
VALERY Dmitriev - जवान अभिनेत्री
कमेडी "एउटै बायाँ": अभिनेता र भूमिकाको
प्लट, भूमिकाको र फिल्म को अभिनेता "Keepers"
Sokolov बोरिस Mihaylovich: जीवनी र काम
सम्पत्ति र दायित्व - उद्यमी को गतिविधिहरु आकलन गर्न एक उपकरण
बाल सदन गर्न बच्चाको लागि आवश्यक के छ? आवश्यकता वस्तुहरूको सूची सङ्कलन
जवारा (हतियारहरू): विवरण, इतिहास, अनुप्रयोग र समीक्षाहरूको सुविधाहरू
बजार सुझाव - के iPhone4iPhone 4S फरक छ
संसारमा सबै भन्दा ठूलो ट्राफिक जाम। ट्राफिक जाम बारेमा रोचक तथ्य
"कला होटल" (वोरोनिश): दर्जा, स्थान, समीक्षा, फोटो
घरमा eyebrows ख्याल। Eyebrows। आकार दिन घरमा भौं